Lomalọma - Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ obodo - Geofumadas
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ọrụ obodo, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi nke ọrụ obodo na usoro dị iche iche nke nnweta, imepụta na ịpụta nsonaazụ maka usoro ndị ọzọ.
Mepụta ikike nke nnweta, imewe na okirikiri nhọrọ ukwuu nke obodo ọrụ ụdị. Usoro a gụnyere mmụta nke Civil 3D, otu n'ime mmemme eji eme ihe n'ọhịa nke topography; yana iji ngwa ọrụ nke ozi ejiri arụ ọrụ na usoro ndị ọzọ nke usoro a, dịka InfraWorks. Na mgbakwunye, ọ gụnyere usoro AutoCAD maka nnabata sara mbara nke arụmọrụ arụmọrụ kọmpụta nke akọwaghị na Civil 3D modulu.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaUbre Civil ọrụ Ọkachamara»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke diplọma - Ọkachamara CivilWorks
AutoCAD ………………… 130.00 19.99
Ọkwa 3D obodo 1 …… USD 130.00 24.99
Ọkwa 3D obodo 2 …… USD 130.00 24.99
Ọkwa 3D obodo 3 …… USD 130.00 24.99
Ọkwa 3D obodo 4 …… USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Geomoments - Uche na Ọnọdụ na otu ngwa
Next Post Ubre - BIM ọkachamara ọkachamaraNext »